भारतको कानपुरमा डीएसपीसहित ८ प्रहरीको गोली हानी हत्या
by कालिका टाईम्स १९ असार २०७७ १५:१०3July 2020 0251
भारत । गुण्डा समूहको आक्रमणमा भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा डीएसपी सहित आठ प्रहरी मारिएका छन् । मारिनेमा एक डिएसपी, तीन सब–इन्सपेक्टर र चार कन्स्टेबल रहेका छन् । घटनामा गुण्डा समूहका तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
आक्रमणमा कयौं प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते प्रहरीको नजिकको रिजेन्सी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आक्रमणकारीहरुले प्रहरीको हतियार समेत लुटेका छन् । विकास दुबे नाम गरेका कुख्यात अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी गएको समयमा आक्रमण भएको हो ।
दिकरू गाँउमा दुबे र उनको समूह रहेको सूचना पाएपछि पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सो समूहले आक्रमण गरेको बताइएको छ । प्रहरी पुग्ने वितिक्कै सो समूहले घरको छतबाट गोली प्रहार गरेको थियो । घटनापछि सो क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उत्तर प्रदेशका कुख्यात गुण्डा नाइके विकासविरुद्ध साठी भन्दा धेरै मुद्दा प्रहरीमा विचाराधिन छन् । उनले सन २००१ मा प्रहरी चौकीमै प्रवेश गरेर भाजपा नेता तथा राज्यमन्त्री संतोष शुक्लाको हत्या गरेका थिए ।
पर्सागढीमा सामुदायिक भवनकाे शिलान्यास
कालिका टाईम्स १७ फाल्गुन २०७७ १४:४० 1 March 2021
समाजवादी युवा संघ पर्सा पूर्णगठन, अध्यक्षमा गौरभ वर्मा चयन
न्युज डेस्क १७ फाल्गुन २०७७ ११:३४ 1 March 2021
दलित परिवारको छोरीको विवाहमा पोखरिया युवा समाजको सहयोग
न्युज डेस्क १७ फाल्गुन २०७७ ११:२२ 1 March 2021
बयोधा अस्पतालमा स्थापना गरिएको एटिएमको निर्देशक बैधद्वारा उद्घाटन
सन्की निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाले तह लगाउन्छ : योगेश भट्टराई
SQL requests:147. Generation time:1.435 sec. Memory consumption:16.45 mb